नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा गृहमन्त्री (फोटोफिचर) - Naya Patrika
नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा गृहमन्त्री (फोटोफिचर)
कृष्ण पौड्याल, काठमाडाैं | साउन ०२, २०७४
विकास, समृद्धि र अन्य समसामयिक विषयका ज्वलन्त समस्या उजागर गर्न नयाँ पत्रिकाले गत सातादेखि न्युजरुममार्फत् बृहत् बहस चलाइरहेको छ । त्यसैक्रममा सोमबारका अतिथि थिए, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर ।
अघिल्लो सरकारका सफल ऊर्जामन्त्री शर्माले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सफलतापूर्वक पूरा गर्न सक्लान् ? प्रहरी संगठनभित्र बढ्दो राजनीति, प्रहरी संगठनको व्यवसायिकरण र स्तरोन्नतिका उनका योजना के–के छन् ? सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था र आसन्न तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका चुनौती उनले कसरी पार गर्छन् ? जस्ता सवालमा केन्द्रित छलफल नयाँ पत्रिकाको फेसबुक पेजमार्फत् लाइभ गरिएको थियो । गृहमन्त्रीको नयाँ पत्रिका न्युजरुम यात्रालाई हाम्रा फोटोग्राफर कृष्ण पौड्यालले यसरी कैद गरेका छन् ।